Ungasigcina njani isiQinisekiso soMxholo oKhokelweyo woNxibelelwano lweKhonkco | Martech Zone
Ialgorithm kaGoogle iyatshintsha ngokuhamba kwexesha kwaye ngenxa yezi nkampani kunyanzeliswa ukuba baphinde bacinge ngazo Izicwangciso zeSET. Elinye lamanyathelo abalulekileyo okwandisa inqanaba ngumkhankaso wokwakha ikhonkco okhokelwa ngumxholo.
Usenokuba ujongene nemeko apho iqela lakho le-SEO lisebenza nzima ukuthumela ii-imeyile zokufikelela kubapapashi. Emva koko, ababhali bakho ngokuzinikela benza umxholo. Kodwa, emva kweeveki ezimbalwa zomkhankaso, uqaphela ukuba akukho ziphumo.
Kunokubakho inani lezinto ezichaphazela ukusilela. Isenokuba ngumbono ombi, imicimbi yangaphandle kwiindaba, okanye, ukungafumani mpendulo ilungileyo kwii-imeyile zakho zokufikelela. Kwakhona, ukwakha amakhonkco kunye nesiza esinegunya eliphezulu akukho lula.
Ke, ukuba umkhankaso wakho awutsali ukugcwala kwabantu, musa ukuba uxinzelelo. Kufuneka usilele kwisicwangciso-qhinga sakho, ubeke umzamo ngakumbi kwaye uqokelele iziphumo ezilindelweyo. Ngoku, ukuba usasokola nesicwangciso-qhinga sokwakha ikhonkco esenziwe ngokukhokelwa ngumxholo, eli nqaku lelakho.
1. Yenza into ekhangelwe ngumshicileli
Gcina ukhumbula ukuba umhleli uya kulayishwa okuninzi kweminye imixholo. Ke, baya kujonga koku kubhalwayo abathi abaphulaphuli babo bathande. Ke, qiniseka ukuba ucwangcisa umxholo wakho ngokungqinelana ne-imeyile yakho yokufikelela ukuze umpapashi angazukuchitha iiyure ukunxibelelana naphambili.
Zibeke kwizihlangu zabaphulaphuli kwaye ucinge ngento obungathanda ukuyifunda. Faka imithombo yolwazi efanelekileyo, iikowuti, imifanekiso, njl. Ukuyenza ibe nomtsalane kwaye ifundeke lula. Sukuyila into engahambelani nomdla womshicileli.
2. Yenza iintloko zakho zibe nomdla
Enye ye Amaqhinga asebenzayo okwenza iphulo lakho Umsebenzi kukubeka izihloko zakho kumshicileli kulwandiso lokuqala. Oku kuyakunceda umpapashi afumane umbono malunga nomxholo wakho kwaye ubenze bonwabe ngephulo lakho.
Ngapha koko, sukufumana ulunge kakhulu njengoko abapapashi begubungela iindidi ezininzi zamabali anokuba kwifom ye-infographic, okanye nokuba yeyiphi, iposti yeendwendwe. Ngokulula, cela ukuba isihloko sihambelana nabaphulaphuli babo kwaye bangathanda ukusipapasha. Sukuthengisa amabali amathandathu ahlukeneyo ngohambo olunye, kuba oko kungabhidisa umpapashi. Emva kokufumana impendulo efanelekileyo kwinto oyifunayo.
3. Musa ukuthandabuza ukulandela ii-imeyile zakho zokufikelela
Amaxesha amaninzi, awufumani mpendulo kunxibelelwano lwakho lwangaphambili kodwa ungalilahli ithemba. Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, abapapashi bahlala bexakekile ukuze baphoswe ziincoko ezithile. Ngenxa yoko, unokulandela kwi-imeyile zakho zokufikelela ukuba awufumani mpendulo okanye ugubungele.
Nangona kunjalo, oku kuyanceda ukuba ubonise isikhumbuzo ngobumnene sophawu lwakho oluya kukunika ukuqonda okungcono malunga nendlela yakho nompapashi. Kwakhona, ukuba umshicileli uphulukene nomdla kumxholo wakho wangaphambili, ukulandelelana kunokubakhuthaza ukuba bajonge kuwo kwaye bavume umbono wakho, ukuba kufanelekile ngokwezihloko ezikhoyo ngoku.
4. Chonga iindawo ezifanelekileyo zonxibelelwano
Ngaba uphando ngokwaneleyo malunga noluhlu lwabapapashi ngaphambi kokufaka iphulo lakho lokuqala? Ukuba hayi, wenza impazamo enkulu. Kuyacetyiswa ukuba uqonde i-niche yomshicileli kwaye ingaba inxulumene neshishini lakho.
Ungaqala ukugcina iphepha labapapashi ngekamva elizayo ngokulandela umkhondo wezihloko abazigubungelayo. Ngale ndlela, unokuba noluhlu lwabapapashi abaya kuba nomdla kumxholo wakho. Ngapha koko, iya kukunceda ukuba wenze umyalezo ngendlela efanelekileyo ukuze uqonde umsebenzi wabo ngokukodwa.
5. Yenza i-imeyile yakho yokufikelela ibe yeyakho
Ngaba uthumela ii-imeyile zokufikelela kubapapashi bonke? Ukuba ewe, uyakubona ukungabikho komdla kwicala labahleli. Kwakhona, ukuba ulandela umkhondo wakho wokucofa, unokubona igrafu yokuhla. Ke, kubalulekile ukuba uyile imeko yakho yokufaka ngokungqinelana nomamkeli we-imeyile.
Ngaphaya koko, ukuba ubeke iphulo kumajelo eendaba aphezulu kwaye awufumani mpendulo, jonga uluhlu lwakho lweempapasho zenqanaba lesibini. Njengoko abapapashi bepakishwe ngee-ajenda ezahlukeneyo kunye neeshedyuli zomxholo, ukubekwa komnye kuphela kunokuphosa amathuba. Ungalibali ukuguqula umyalezo othunyelweyo.
6. Sondela kumaqonga awahlukeneyo
Oku kulula kodwa kuyasebenza qhagamshela iqhinga lokwakha. Ukuba isicwangciso sakho esiqhelekileyo kubandakanya unxibelelwano nge-imeyile, ngeli xesha ucofe iqonga elitsha. Mhlawumbi, ibhokisi yemiyalezo yabapapashi izaliswe ngamanzi nge-imeyile, ke baphose ezinye zazo.
Ungathumela ikhonkco lephulo lakho ngeTwitter okanye kwiLinkedIn, okanye uthathe ifowuni. Liqhinga ukusika ii-imeyile ezixineneyo kwaye ubambe ingqalelo yomshicileli kwimikhankaso yakho.
7. Yiba kwiindaba eziphambili
Ngamanye amaxesha, iphulo alisebenzi ngenxa yexesha elibi. Akukho mntu uya kuba nomdla kwinto esele yenzekile. Ke, kubalulekile ukuba ujonge kwiziganeko ezizayo kunye neziganeko ezikungqongileyo.
Umzekelo, usungule umkhankaso wokuhamba ngexesha lobusika. Ngaba iya kusebenza ngokufanelekileyo njengoko ibiya kuba njalo ehlotyeni?
Khumbula, soloko ukhetha isihloko ubuncinci kwiintsuku ezili-15 ngaphambi komsitho ozayo okanye izihloko ezishushu ezishushu okanye iindaba. Ngapha koko, unokukhetha isihloko ngokubanzi ukuba unomdla kubaphulaphuli bakho ojolise kubo. Ungasichaza nesizathu kwisandi sakho sokuba kutheni uthumela iphulo ngoku.
8. Mamela imigca yesifundo
Usenokuzibuza ukuba ngaba ii-imeyile zakho ziyavulwa na? Kule nto, ungasebenzisa isoftware yokulandela umkhondo ukwenza isicwangciso sokufikelela ngakumbi. Ke, ukuba ubona amaqondo avulekileyo amabi, ungazama amaqhinga ahlukeneyo.
Zama ukuthumela ii-imeyile ngomgca wesifundo esinomtsalane ukuze ubambe ingqalelo yomhleli. Unokuzama imigca emitsha yesifundo see-imeyile ezahlukeneyo. Oku konke kukudala into enomdla kubapapashi kwaye ibenze bacofe kwi-imeyile yakho ukuze bazi ngakumbi. Endaweni yokuchaza nje isihloko sakho ngokucacileyo, ungasebenzisa imisebenzi enje ngophando olutyhilekileyo okanye idatha entsha.
9. Nika into ekhethekileyo
Ukuba unika into ekhethekileyo kumshicileli, ngokuqinisekileyo baya kuyithenga. Oku kungasindisa nephulo lakho lokuqhuba kakubi. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, yenza indlela elungiselelwe wena kwaye ugcine unxibelelwano lufanelekile kwaye kufanelekile.
Kwakhona, ukuba iphulo lakho alisebenzi ngokufanelekileyo, cinga ngokusebenza kunye nabapapashi abakhe basebenza nawe ngaphambili kwaye ubanike umxholo okhethekileyo okwethutyana. Nje ukuba ufumane ikhonkco elinamandla lephulo elikhulu, ungaqala ngakumbi ukudibanisa inkonzo yokwakha kunye nendlela yokushicilela abakumgangatho ophezulu.
La manqaku akhankanywe apha ngasentla aya kukunceda ukuba uphucule Umxholo okhokelwa yimikhankaso yokwakha amakhonkco, kodwa kungathatha ixesha ukukhupha iziphumo ezilungileyo kwizinga lakho. Eli xesha lixhomekeke kwimisebenzi yakho, ukhuphiswano kwishishini lakho, amagama aphambili ekujoliswe kuwo, imbali kunye namandla e-domain yakho.
Ngapha koko, kuya kufuneka ugcine umkhondo wenkqubela phambili yakho, ukuqala ngenqaku lendawo okhoyo ngoku. Ngaloo ndlela, unokwenza ukulindela okwenyani kwindawo yakho yewebhusayithi kunye nemephu yendlela yokufezekisa. Emva koko ungaqala imisebenzi ngokungqinelana nesicwangciso sakho sokuphucula iwebhusayithi yakho, ukusebenza kwi-Intanethi kunye neshishini.
tags: Isicwangciso sokufikelela kwi-backlinkIsicwangciso sokufikelela sokunxibelelanaikhonkco lemikhankasoukufikelelaamacebo seo
Iscreen seVidiyo: Imfuno kunye neQonga leNkqubo yeTV yeTV